दिसापिसाब गर्दा किन कानमा जनै राखिन्छ ? - Gaule Media ::
Home/रोचक/दिसापिसाब गर्दा किन कानमा जनै राखिन्छ ?
ramsharan२० कार्तिक २०७४, सोमबार १४:०९
वैदिक परम्परा अनुसार सुतीबाट बनेको पवित्र धागो लगाउने व्यक्ति यज्ञ र पूजनका विधानमा अधिकार प्राप्त गर्छ । यज्ञोपवीत विशेष विधिबाट बनाइएको हुन्छ र यसमा सात ग्रन्थि हुन्छन् । ब्राह्मणहरूको यज्ञोपवीतमा ब्रह्मग्रन्थि हुन्छ । तीन सूत्र भएको यो जनै गुरुदीक्षापछि सदा धारण गर्नुपर्छ । तीन सूत्र हिन्दु त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको प्रतीक हो ।
किन बेर्ने त कानमा ?
शास्त्रहरूमा दाहिने कानको महात्म्य वर्णन गरिएको छ । आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम र सूर्य लगायतका देवताहरू दाहिने कानमा बस्छन् । दाहिने हातले दाहिने कान स्पर्श गर्दा मात्र पनि आचमन गरेको फल प्राप्त हुन्छ । त्यसैले शौचका बेला जनै जस्तो पवित्र वस्तु दाहिने कानमा राख्दा अशुचित्व आउन पाउँदैन ।
शास्त्रमा भनिएको छ, यथानिवीनी दक्षिणकर्णे यज्ञोपवीतं कृत्वा मूत्रपुरीषे विसृजेत् । यसको अर्थ हुन्छ, दिसापिसाब गर्ने समयमा दाहिने कानमा जनै राख्नु जरूरी हुन्छ । हातगोडा धोएर कुल्ला गरेपछि मात्र जनै कानबाट निकाल्नुपर्छ । यो किन गरिएको हो भने शरीरमा नाइटोमाथिको भाग धार्मिक क्रियाका लागि पवित्र मानिन्छ भने नाइटोमुनिको भाग अपवित्र । दाहिने कानलाई यत्तिको महत्व दिनुको वैज्ञानिक कारण के हो भने यस कानको नसासँग जननेन्द्रिय र अण्डकोषको अभिन्न सम्बन्ध छ । पिसाब फेर्दा वीर्यपतनको पनि सम्भावना हुन्छ । त्यसैले पिसाब गर्दा जनैलाई कानमा घुसारेमा वीर्यनाश हुन पाउँदैन । लगातार स्वप्नदोष भयो भने पनि दाहिने कानमा जनै बेर्दा समस्या समाधान हुन्छ ।
जनै लगाएपछि नियममा बाँधिनुपर्छ । मलमूत्र त्यागेपछि तत्कालै जनै कानबाट खोल्नुहुँदैन । पहिला राम्ररी सफा हुनुपर्छ अनि मात्र जनै उतार्नुपर्छ । यो सफाइले व्यक्तिलाई रोगबाट बचाउँछ । यति सबै भनिरहँदा एउटा प्रश्न भने उठ्छ । पुरुष त्यो पनि व्रतबन्ध गरेको व्यक्तिले जनै लगाएर विभिन्न फाइदा लिन्छ भने नारी र जनै नलगाउने जातिका व्यक्तिका लागि के हो त विकल्प ? पञ्जाब केशरी
यस्ता अंगमा कोठी हुने ब्यक्तिको बैवाहिक जीवन सुखी हुन्छ
२० कार्तिक २०७४, सोमबार १४:३७